February 2008 ~ စန္ဒကူး
အမှန်ကတော့ပုံဘဲကြည့်ပြီးသူတိုကမစားရလို့.. မနာလိုတာဖြစ်မယ်.. ဟီးဟီး
ဒီနေ့တော့ မုန်လာဥချဉ် သုပ်နဲ့ ပဲတီပေါက်သုပ်အကြောင်းကိုရေးမလို့ပါ။
ချဉ်ဖတ် ကိုအရမ်းကြိုက်ပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိပါဘူး။ ဒီရောက်တော့ ချဉ်ဖတ်စားချင်လို့ ကိုးရီးယား ကင်မ်ချီကို ၀ယ်စားတယ်.. အရသာကတော်တော့ကိုဆိုးတယ်..ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘူး ကြိုက်ဘူး။
ချဉ်ဆုတ်နေတဲ့အထဲ အနံ့က စိမ်းရွှင်ရွှင်နဲ့...
ဒါနဲ့ မာမီကိုဖုန်းဆက်ပြီး ချဉ်ဖတ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲမေးတယ်။ ပထမတစ်ခါ..မုန်လာဥတွေဝယ်..ဗူးကြီးကြီးဝယ်ပြီး
အချဉ်တည်မယ်ဆိုပြီး...ထမင်းချက်ပြီး ဆားနဲ့ရောနယ်.. မုန်လာဥလှီးထားတာတွေနယ်.. ဗူးထဲမှာသိပ်.. နေလှန်း...
တစ်လပြည့်လို့ ပုပ်သွားတယ် မချဉ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဇွဲမလျော့ဘူး။ နောက်တစ်ခါထပ်ဝယ်..လှီးပြီးဆန်ဆေးရေနဲ့စိမ်တယ်.. ဆားထည့်တယ်..မချဉ်ပြန်ဘူး။ နောက်တော့ မာမီကပြောတယ် ဘာဆားသုံးတာလဲဆိုတော့.. အိုင်အိုဒိုက် ဆားသုံးတာကိုး...ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူး..ဆားအကြမ်းသွားဝယ်... နောက်တတိယတစ်ခါစိမ်တော့ အောင်မြင်သွားတယ်..ပျော်လိုက်တာ...
မြေပဲကြော်ကို ညက်အောင်ထောင်း၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်ထည့်
အားလုံးထည့်ပြီးတဲ့အခါမှ၊ နံနံပင်လေးအုပ်ပြီး နယ်လိုက်တော့...ကောင်းလိုက်တာပြောမနေနဲ့..ထမင်းနဲ့တောင်မစားတော့ဘူး။ နယ်ပြီးရင်တော့ပန်းကန်ပြောင်းထည့်ပေါ့... နယ်ထားတဲ့ပန်းကန်က ပေနေမှာလေ... ဒီတိုင်းထိုင်စားတာတစ်ပန်းကန်ကုန်တယ်။
ပဲတီပေါက်လေးတွေကို ရေနွေးနဲ့အရင်ဖျောပြီး ဇကာနဲ့စစ်ထားပါတယ်။
ပဲမှုန့်၊ ဆား၊ ချိုမှုန့် နဲနဲ ကိုထည့် ပြီး နံနံပင်လေးအုပ်နယ်လိုက်တာပါ။
Posted by စန္ဒကူး at 5:27 AM
တစ်နေ့က.. ညီမ၀မ်းကွဲက ငါးပိရေကျိုစားခြင်တယ်တဲ့။ ရှိသေးလား လို့မေးတော့ ကျွန်မကရှိတယ်။ ယိုးဒယား ငါးပိလားလို့မေးတော့ သူက မဟုတ်ဘူး..မြန်မာငါးပိဘဲစားချင်တယ်တဲ့။ ဆိုတော့..ကျွန်မက နဲနဲကျန်သေးတယ်။ ပို့ပေးလိုက်ရမလားဆိုတော့သူကမပို့နဲ့အမနဲ့အတူစားချင်တာတဲ့.. ခုတစ်လောနေကသိပ်မကောင်းအလုပ်ကပင်ပန်း စိတ်လဲ ပင်ပန်းနဲ့ ဒီအချိန် နို့မှုန့်လာကျွေးရင်တောင်ကောင်းကောင်းစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး..ဒါပေမယ့် သူလာတော့ ငါးပိကို အိမ်က ကောင်မလေး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သောက်ေ၇သန့်ဗူးထဲကိုထိုးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုခက်ရင်းနဲ့ ဆွဲထုတ်တာ..ဟူးးးး မောတယ်။ ထည့်တဲ့သူကတော့ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းမလဲမသိဘူး။ ငါးပိက မာမီ့ရဲ့ selected ဆိုတော့ အကျည်းခွံပါတဲ့ ငါးသေးသေးတွေ.. ကိုသေချာလုပ်ထားတာ.. ကျိုလိုက်တော့ မွှေးးနေတာဘဲ.နဲနဲတော့ကျဲတယ်. ဒါနဲ့ကျွန်မက ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကို အညှာချွေ၊ ကြက်သွန်ဖြူကိုအခွံနွှာပြီး လှော်လိုက်တယ်။ အနံ့သင်းပြီးမွှေးလာရင်ချ၊ ပြီးတော့ ညက်အောင်ထောင်း၊ ခွက်ထဲထည့်၊ ပြီး ငါးပိရည်ကျိုပူပူကိုအပေါ်လောင်းထည့်..အနံ့ကတော့မွှေးနေတာဘဲ။ တစ်အိမ်လုံးငပိနံ့ကလှိုင်လှိုင်ထနေတာ။ ဒါတောင်သူများကိုအားနာလို့ ကျိုတုန်းက အဖုံးအုပ်ထားသေးတယ်.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစာဆိုတော့လဲ မွှေးနေတာပေ့ါ။
တူတော်မောင်ကတော့ ငြိမ်ငြိမ်နေပါဘူး။ သူ့အမေဟင်းချက်တာကို ကြည့်ချင်တာ.. မကြည့်ရရင်အော်ငိုရော။ သူကလှမ်းကြည့်ဖို့အရပ်မမှီတော့ ဂက်စ်မီးဖိုခလုတ်တွေကို လှည့်နေတာ တစ်ခုပြီးတစ်ခု..တစ်ခါတစ်လေ..ဟာ ..ဟင်းအိုးခုထိမဆူသေးပါလား..မမေးနဲ့ တူတော်မောင်..ခလုတ်လှည့်ပြီးပိတ်ထားတာ.. သူကဖွင့်ပိတ်မသိဘူး..သူလှည့်ရရင်ပြီးရော.. ဒါနဲ့ ဟင်းချက်တုန်းမှာ သူ့အမေတလှည့်၊ ကျွန်မတလှည့်သူ့ကိုချီထားရတယ်။ သူ ဟင်းချက်နေတာကိုမြင်ရရင်ငြိမ်ငြိမ်လေးကြည့်နေတယ်။ နင့်သားတော့ကြီးလာရင် စားဖိုမှူးဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့ ကျွန်မတောင်ပြောလိုက်သေးတယ်။
ညီမ၀မ်းကွဲက ကျွန်မကို ငါးကိုအုန်းနို့+ ဆနွင်းတက် နဲ့ချက်တာစားဖူးလား..ချက်ကျွေးမယ်ဆိုပြီး သူနနွင်းတက်လေးတွေဝယ်လာတယ်။ ကျွန်မအဲဒါတွေကိုဈေးမှာအမြဲတွေ့တယ်။ ဘာမှန်းမသိလို့မ၀ယ်တာ။ ဂျင်းအတက်လိုဘဲ ဒါပေမယ့်နဲနဲသေးတယ်။ အဲဒါကိုခြောက်အောင်လုပ်ပြီးကြိတ်ရင် နနွင်းမှုန့်ရတယ်တဲ့..
အင်း..နနွင်းမှုန့်နဲနဲထည့်ရင်တောင်..ဟင်းတွေဝါ။ အိုးတွေဝါ..အခုနနွင်းတက်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်တော့.. ဗြောင်းဆန်အောင်ဝါတယ်။။ လက်မှာအခုထိဝါတုန်းဘဲ။မီးနေသည်နဲ့တောင်တူလာပြီ...
သူက ကြက်သွန်ဖြူ၊နီ ဂျင်းနဲနဲနဲ့ နနွင်းတက်များများကို ငရုတ်ဆုံထဲညက်နေအောင်ထောင်းတယ်။ ပြီးတော့ ဆီချက်သတ်တယ်။ အနံ့ကတော့မွှေးနေတာဘဲ။ ပြီးတာနဲ့ အုန်းနို့မှုန့် ကို ရေအေးနဲ့ဖျော်ပြီးတော့ ဆီချက်သတ်တဲ့အိုးထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်။ ပွက်တာနဲ့ တလားဗီးယားငါးအကောင်လိုက်ကို ဓားနဲ့ နဲနဲမွှန်းပြီး ထည့်လိုက်တယ်။ ဆား၊ ချိုမှုန့် သင့်တော်ရုံထည့်ပြီး အစက အုန်းနို့အနှစ်ဟင်းရည်က ငါးအကောင်ကို ဖုံးလုခင်ခင်..အဲဒါကို မီးအေးအေးနဲ့ခပ်ကြာကြာတည်လိုက်တော့ ငါးလဲကျက်၊ အုန်းနို့ဟင်းအနှစ်လဲ တော်တော့်ကိုပျစ်နေပြီ ဆိုမှအိုးကိုချလိုက်တယ်။ အဖုံးတော့ဖုံးလို့မရဘူး ၊ အုန်းနို့ပါတော့ အဖုံးဖုံးရင် ဝေကျတယ်။
အုန်းနို့က လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကိုသုံးလဲရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့က အလွယ်နည်းဆိုတော့၊ အုန့်နို့အမှုန့်လဲ တော်တော့်ကို မွှေးပါတယ်။ ကျက်တော့ ငါးတစ်ကောင်လုံးထဲကို အုန်းနို့အနဲ့တွေနဲ့ အရသာစိမ့်စိမ့်လေး..အရမ်းစားလို့ကောင်းပါတယ်။ အချိန်ရပြီးအားမယ်ဆိုရင်ချက်စားကြည့်ကြပါလား။
အအီပြေအတွက်ကတော့ ဆန်ဆေးရည်ကိုတည် ပွက်တာနဲ့ ပိန်းဥလေးတွေအခွံနွှာထည့်၊ ပြီးရင် မန်ကျည်းမှုန့် နဲနဲထည့်၊ကြက်သွန်နီလေးတွေလှီးထည့်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ တော့ ကန်ဇွန်းဥအရွက်နုစိမ်းစိမ်းလေးတွေထည့်လိုက်တော့
Posted by စန္ဒကူး at 8:03 AM
၁။ ဆယ်လမွန်ငါးစားလောက်ရုံး (ပဲပြားတုံးခန့်) အတုံးတစ်တုံး အရေခွံဓားနဲ့လျှပ်ခွာပါ။
၂။ ဆား+ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကို ငါးအသားတုံးပေါ်အနဲငယ်ပတ်ပတ်လည်လိုက်ဖြန်းပါ။
၃။ မကပ်နိုင်တဲ့ဒယ်အိုးမှာဆီနဲနဲထည့်၊ ဆီကိုဒယ်အိုးမှာပြန့်အောင်လုပ်ပါ။ အငွေ့ထွက်လာလျှင်ငါးအသားတုန်းကိုထည့်.. လှည့်ပြီး ရွှေအိုရောင်သန်းလာသည်အထိလှိမ့်ပါ..ပြီးအဖုံးခဏအုပ်အလွန်ဆုံး (၂)မိနစ်နှင့်ဆို ငါးကျက်နေပြီး..ထို (၂) မိနစ်အတွင်းမီးကိုအေးအေးမျှင်းမျှင်းထားပါပြီးဒယ်အိုးမှထုတ်အအေးခံ
၄။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ ဂျင်းကို တောက်တောက်စင်းဆီနဲနဲထည့်… ပူရင် ဆနွင်းနဲနဲထည့်..ပြီးဆီသတ်၊ မဆလာ ထည့်..ငရုတ်သီးမှုန့်ထည့်အနှစ်ရအောင်ဆီသတ်။။အချိုမှုန့်၊ဆားလိုတဲ့အရသာထည့်..
မီးအေးအေးနှင့်အနှစ်ရအောင်မွှေပါ။ ပေါ့ ငံမြည်း.. လိုတာထပ်ထည့်(အချဉ်ကြိုက်ရင် မန်ကျဉ်းရေ.. သို့ အချဉ်မှုန့်ထည့်)
၅။ ငါးရုတ်သီးအနီပွ.. အနီနဲ့ အစိမ်းရောင်၊ ဂေါ်ဖီထုတ်တို့ ကို ပါးပါးလေး မျှင်မျှင်လေးရှည်ရှည်လေးလှီးပါ။ပြီးဆီအိုးကပ်တည်ပြီး.. တစ်ချက်နှစ်ချက်ထည့်မွှေပါ.. ပြီးရင်ခပ်ပြီး
ပုဂံအလည်မှာ ငါးရုတ်သီးအနီပွ.. အနီနဲ့ အစိမ်းရောင်၊ ဂေါ်ဖီထုတ်ရောပြီး ဆီပူမှာလှိမ့်ထားတာကို လုံးလုံးလေးပုံ..ပြီးငါးကိုတင်..ပြီး ဟင်းအနှစ်ကိုအပေါ်မှလောင်းချပါ..ပြီး အပေါ်မှနံနံပင်အုပ်..(အခုကတော့ ကန်ဇွန်းဥလိုမျိုး၊ နိုကိုဥလိုဥနီကို အုန်းသီးခြစ်တဲ့ဟာနဲ့ခြစ်ပြီးအုပ်တင်ထားတာပါ)သံပုရာနှစ်လုံး (သို့) လျှောက်သီးလှီးဘေးမှာတင်ထား..(လိုရင်အချဉ်ညှစ်စားလို့ရတာပေါ့)ပြီးတော့ ထောပတ်သီးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးတစ်လုံးလောက်ကို ခပ်ထူထူလှီးပြီးဘေးမှာချထားပါ..ထောပတ်သီးစားရင်အသားရေလှတယ်.. ဆယ်လမွန်ငါးက ဗီတာမင် (E)နဲ့ ထောပတ်သီးကလဲဗီတာမင် (E)ူအာနိသင်တူတူဘဲ။ ဒါကြောင့်တွဲစားတာကောင်းတယ်။ ချယ်ရီတိုမားတိုး၊ပန်းခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေကိုဘေးမှာချထားလိုက်..
Credited to To To Ni Ni
Posted by စန္ဒကူး at 11:16 PM
လမ်းဘေးမှာ တွန်းလှည်းလေးနဲ့ အပေါ်မှာ သဲနဲ့ရောပြီးလှော်တဲ့ကြိမ်သီးတွေရောင်းတာတွေ့ဖူးကြမှာပါ...
ရန်ကုန်မှာတုန်းက လမ်းဘေးမှာတွေ့တာနဲ့ ကားရပ်ခိုင်းပြီး ဆင်းဝယ်တာ..အရမ်းကြိုက်တယ်။
မာတာကတော့ ပြောမနေနဲ့..သူငယ်ချင်းတွေက..သွားကျိုးမယ်တဲ့..တစ်လုံးနှစ်လုံးလောက်စား ပြီးရင် သူတို့မစားနိုင်တော့ဘူး.
ဇွဲရှိရှိနဲ့စားတာကတော့ ကျွန်မဘဲ.. ဒီရောက်တော့ ကြိမ်သီးကို Roast လုပ်ပြီးရောင်းတာဝယ်စားတယ်။ ဈေးတော့နဲနဲကြီးတယ်။ တစ်ခြားအသီးတွေမစားဘဲချွေတာလိုက်တော့ စားချင်တဲ့ကြိမ်သီး ကိုတစ်ချိန်လုံးထိုင်စားလို့ရပြီ။
အမကြီးတစ်ယောက်ကမေးတယ်.. ကြိမ်သီးနင်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိလားတဲ့.. ဟာ.ရှိတာပေါ့..အများကြီးဘဲ...
ဘယ်လိုအပင်မျိုးလဲတဲ့.. ကျွန်မက ကြိမ်ခုံတစ်ခုကို ပြလိုက်တယ်.. အဲဒါကြိမ်သီးရဲ့ အပင်ပေါ့လို့... သူတို့ကလဲ မတွေ့ဖူးတော့ ဟုတ်လား..တခါမှမသိဘူးတဲ့...ကြိမ်သီးက အင်္ဂလိပ်လို chestnut's လို့ခေါ်တယ်လေ.. အဲဒါ ကို အွန်လိုင်းက မမ ခိုင်ခိုင်ထွန်းက ကြိမ်သီးမဟုတ်ဘူး မြေဇာဥလို့ခေါ်တယ်လို့ အတင်းလာငြင်းနေသေးတယ်... မလွယ်ဝူး...
အမှန်က ပဲခူးကို (၉)တန်းတုန်းက ကျောင်းပေါင်းစုံကပွဲသွားတုန်းက ကြိမ်ပင်တွေတွေ့ခဲ့တယ်.ကြိမ်သီးလေးတွေကိုလဲ ခူးစားခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းကသေးသေးလေး.. အခုဟာက အကြီးကြီး..
တစ်ကယ်ေ တာ့ ကြိမ်ပင် က သတ်သတ် ၊ ကြိမ်သီးက သတ်သတ်ပါ..
ကြိမ်သီးလို့ကျွန်မတို့ခေါ်တဲ့ အသီးက ကြက်မောက်သီးလို အမွှေးတွေနဲ့.. အဲဒါကို ခွဲမှ အထဲမှာ အခွံမာမာလေးနဲ့ ကြိမ်သီးဆိုတဲ့ဟာလေးတွေထွက်လာတာ.. မြန်မာတွေကတော့ နာမည်ပေးတာတော်တယ်လို့ပြောရမယ်.. ကြိမ်သီးအခွန်က ကိုက်လိုက် ရင်ကြိမ်ဝါးကို ကိုက်ရသလိုဖြစ်နေတာကိုး...
အမှန်ကတော့ တုံးလွန်းတာကျွန်မပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာမှုအရမ်းအားနည်းခဲ့တာ... သနပ်ခါးပန်းရဲ့ ပင်စည်က သနပ်ခါး ဆိုပြီးခုတ်ပြီးသွေးလိမ်းလို့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးနီပြီးယောင်လားဖူးတယ်။ ပထမနှစ်လောက်တုန်းက အရှေ့တောင်တိုင်းက ကရင်မတွေ မျှစ်သွားချိုးမယ်ဆိုပြီး ၀ါးပင်ပေါက်စတွေယူလာတာကိုလဲ ထိုင်ရီဖူးတယ်.. တောသူမတွေ မြက်တောင်စားရင်စားမှာ..လို့ နောက်ဖူးတယ်...ကောင်းပါလေရော... နောက်တော့လဲ သူတို့ယူလာတဲ့ဝါးပေါက်စလေးတွေနဲ့ တာလပေါ့ချက်တာကို မြိန်မြိန်ရှက်ရှက် သောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့က ရာဘာကုန်း (တောင်တစ်ခုလုံးရာဘာပင်စိုက်ထားတာ) မှာအလုပ်လုပ်တော့ ကျွန်မကို တစ်ခါတစ်လေ တောင်ပို့မှိုအကြီးကြီးတစ်ခုတစ်လေတွေ့ရင်နုတ်လာပေးတယ်.. ပြီးတော့ မီးဖုတ်ပြီးကျွေးတယ်.. ကောင်းမှကောင်းဘဲ..ကြော်စားတာထက်တောင်ကောင်းသေး...မှိုအစားကောင်းလို့ ကျန်တဲ့သူတွေက မှိုတောက်လို့ဆေးရုံရောက်..့ကျွန်မကတော့မသိသလိုနဲ့..ဆရာတွေလာမေးတော့..
တစ်ခေါက်လဲ ဒညင်းသီးမီးဖုတ်အရမ်းစားချင်တာ.. ဒညင်းသီးတုန်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ အစိမ်းမရှိဘူးး..ဒါနဲ့ဘဲ အမ၀မ်းကွဲ က ဆားရည်စိမ်ထားတဲ့ဒညင်းသီးဘဲရှိတယ်တဲ့..ကျွန်မ ဖုတ်စားရအောင်ကောင်းမှဘဲဆိုပြီး ..ဆားရည်စိမ်ဒညင်းသီးတွေထုတ်..ဖုတ်စားတာ.. နောက်နေ့ အမ၀မ်းကွဲ က ၀မ်းလျှောပြီးကျောင်း (၂) ရက်လောက်မတက်နိုင်ဘူး..ကျွန်မကတော့ ဒေါင်ဒေါင်မြည်... ဆိုးတယ်နော်..ဟိဟိ
အစကတော့ေ၀၀ါးဝါးနဲ့ ခံယူချက်ကမငြိမ်ဘူး
ပဲပြားကို အတုံးလေးတွေတုံးပြီး ဆား၊ နနွင်းနဲနဲသမအောင်ထည့်၊ ဆီများများနဲ့ ကြွပ်နေအောင်ကြော်၊
ပြီးရင် ခပ်ပြီးဆယ်ထား..ဆီစစ်ထား၊ ပြီးကြက်သွန်ဖြူနီကို ကြော်..ပြီးအားလုံးအတူရောလိုက်ရင်..
Posted by စန္ဒကူး at 6:13 AM
ဘူးသီးကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အကွင်းလိုက်လှီးပါတယ်။(အခွံနွှာဖို့မလိုပါဘူး)
မုန့်နှစ်ကတော့ အိမ်ကယူလာတဲ့ရွှေလိပ်ပြာအကြော်မှုန့် ကိုသုံးပါတယ်။
ဆီအရမ်းပူပြီးအငွေ့တွေတက်လာတာနဲ့ မီးကို အေးအေးရောက်အောင်လျှော့ချပြီး ဗူးသီးလေးတွေတစ်ချောင်းဆီထည့်ကြော်တာပါ..အထက်အောက်..လှန်ပေးး..အနီညိုရောင်လေးသန်းလာရင်တော့ စကာထဲထည့်စစ်ထား... ဆီစင်လောက်မှ တစ်ရှူးသန့်သန့်မှာတင်ပြီး ထပ်စစ်..ပြီးရင်တော့စားလို့ရပါပြီး...
အချဉ်ရေကတော့ မန်ကျည်းမှည့်ကိုရေစိမ်ပြီး မန်းကျည်းရေကိုယူ
ငရုတ်သီးစိမ်း ကိုလဲညက်အောင်ထောင်းပါ။ ပြီးရင်တော့ နံနံပင်တောက်တောက်စင်းပြီး ဆား၊ ချိုမှုန့်နဲ့ ဖျော်လိုက်ရုံပါဘဲ။
Posted by စန္ဒကူး at 5:56 AM
ကျွန်မဒီနေ့ သူငယ်ချင်တစ်ယောက်ကပို့ပေးလိုက်တဲ့ ဒီပုံလေးတွေနဲ့ စာကိုဖတ်ပြီး မျက်ရည်တောင်ကျမိတယ်။
ကျွန်မအကောင်လေးတွေကိုအရမ်းချစ်တယ်.... ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်မပေးဘဲ သူတို့ဘာသာနေတဲ့အကောင်လေးတွေကို အပျင်းပြေလိုက်သတ်ဖြတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို စိတ်ကိုထိခိုက်စေခြင်းနဲ့အတူ တတ်နိုင်သလောက် ဝေဌပေးချင်လို့ ဒီပိုစ်လေးကိုတင်လိုက်တာပါ။
နော်ဝေး နဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံတွေမှာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကို ဆွဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့... ဖျံကလေးတွေကိုသတ်ရအောင် ဆိုပြီး သူတို့ပြောတာကတော့ အမဲလိုက်အားကစားနည်းတစ်မျိုးတဲ့
ကျေးဇူးပြုပြီးရပ်ပါတော့... ဒီလိုကြမ်းတမ်းရက်စက်တဲ့သူတွေ လူ့အဖွဲအစည်းမှာရှိနေကြလားဗျာ
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလည်းကြည့်ကြပါအုံးဗျာ. ကျွန်တော်တို့မှာ အကာကွယ်မရှိပါဘူး.. သေနတ်လဲမရှိပါဘူး...ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီကြပါ
ဒီပုံတွေကြည့်ပြီး ခင်ဗျားတို့လဲစိတ်ထိခိုက်မယ်ဆိုတာသိပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လဲနာကျင်ခံစားနေရပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့တွေထဲက အများစုဟာ ရက်စက်တဲ့သားသတ်သမားတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ သေဆုံးပြီးဖြစ်သလို အခုလဲ သူတို့တွေ သတ်ဖြတ်တာကိုခံနေရပါတယ်။
သူတို့ကိုဘာကများ ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်ဖို့အခွင့်ပေးရတာလဲ။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့သေခြင်း၊ ရှင်ခြင်းကိုအဆုံးဖြတ်ပေးရအောင်ဘယ်သူတွေမို့လို့လဲ။
ဘာကစားနည်းမျိုးလဲ..ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးခဲ့ဖူးပါဘူး.. ကျွန်တော်တို့ ရေကူးတယ်.. လမ်းလျှောက်တယ်.. အစားစားတယ်.. ဒါပေမယ့် အခုသူတို့သတ်လို့ သေကြရတော့မယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်ကြပါ။
Knorr termerine cube (1)
ဆန်ဆေးရေ (ဒုတိယ /တတိယ) ကို အိုးထဲထည့်တယ်ပါ။ ပွက်ပွက်ဆူလာလျှင်..ကြက်သွန်နီကိုလှီးထည့်ပါ။ ဂျင်းကိုအပြားဝိုင်းဝိုင်းလှီးထည့်ပါ။
ငါးကြီး(၄) ပိုင်း(သို့) ငါးခေါင်း ကိုအတုံးလိုက်ထည့်ပြုပ်ပါ။ ပိန်းဥအခွံခွာ လေးခြမ်းခြမ်းထည့်ပါ။ ပိန်းဥနူးလောက်သည်အထိအနဲငယ်စောင့်ပါ
မုန်လာဥဖြူစောင်းစောင်းလှီး၊ မုန်လာထုပ်အဖြူ နှင့် ဌက်ပျောဖူကိုလှီးထည့်ပါ။ Knnor မန်းကျဉ်းခဲတစ်ခဲထည့်ပါ။ (မန်ကျည်းရည်ထည့်လဲရပါတယ်) ဆား၊ ချိုမှုန့်ထည့်ပါ။ ပွက်ပွက်ဆူလာလျှင် ပေါ့/ငံ/ချဉ်.. မြီးပြီး.. ကန်ဇွန်းပင် အရှည်လိုက်ရေဆေးပြီးထည့်ပါ။ ပဲသီး ကို ရှည်ရှည်ဖြတ်ပြီးထည့်ပါ။ ပြီး အဖုံးအုပ်ပြီးမီးဖိုပေါ်မှချပါ။။
Posted by စန္ဒကူး at 10:04 PM
ဒီနေ့ညနေ..ပျင်းပျင်းနဲ့လမ်းလျှောက်.. ဈေးရောက်တော့ ကြက်ဟင်းခါးသီးအရှည်တစ်လုံးဝယ်လာတယ်။
ပထမဆုံးကြက်ဟင်းခါးသီးကိုပါးပါးလှီး၊ ဆားနဲနာနာနယ်၊ ရေနဲနဲထည့်။။ နယ် ပြီး နှစ်ရေလောက်ဆေးထား.. (နဲနဲလျှက်ကြည့် ဆားအရသာ..ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာစိမ့်ဝင်နေလိမ့်မယ်)
ကြက်သွန်နီ ကို ဓါးနဲ့ နုတ်နုတ်စင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူကို ဓါးပြားရိုက်ပြီး..သေးသေးလှီး
ဆီနဲနဲများများ..မှာထည့်ကြော်... အနံ့လေးမွှေးလာတာနဲ့ ဗလချောင်ကြော် (အိမ်မှပို့ပေးသည်) နှစ်ဇွန်းလောက်ခပ်ထည့်.. တစ်ချက်နှစ်ချက်မွှေပြီးတာနဲ....
ကြက်ဟင်းခါးသီး ကိုထည့်.. အချိုမှုန် နဲနဲလေးထည့် (ဆားထည့်ရန်မလိုတော့ပါ).. ပြီးတော့ အဖုံးမအုပ်ဘဲမီးအေးအေးနဲ့ကြော်... နဲနဲနွမ်းလာ ရင်..
နော ကြက်သားခဲ Knorr Chicken Cube တစ်ခြမ်းကိုထည့် (ဘာရယ်မဟုတ်စမ်းထည့်ကြည့်တာ၊ ကျက်မှအရမ်းကောင်းမှန်းသိတာ)
ပြီး.. မီးအေးအေးလေးနဲ့ကြွပ်အောင်ကြော်... အရမ်းကိုစားလို့ကောင်း... ထမင်းမပါဘဲနဲ့တောင်..ဒီတိုင်းစားလို့ကောင်းတယ်။။
အရင်တုန်းကလဲခဏခဏကြော်စားဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှဒီလောက်အရသာမရှိဘူး..
Posted by စန္ဒကူး at 10:01 PM
မုန်ညှင်းစိမ်း (အစိမ်းရောင်..ခါးသက်သောအရသာရှိပါသည်) ကိုရေစင်အောင်ဆေး..သင့်တော်ရုံဖြတ်ပြီး အိုးထဲထည့်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီနှင့် ဂျင်းအနဲငယ်ကိုထောင်းပြီး ထည့်ပါ။ ငံပြာရည်ထည့်ပါ။ မျှင်ငပိအနဲငယ် ရေဖျော်ထည့်ပါ။ ဆနွင်းနဲနဲ၊ အရောင်တင်မှုန့်ထည့်ပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုနှစ်ခြမ်းခြမ်းပြီးထည့်ပါ။ ဆား၊ ချိုမှုန့် ဆီနဲငယ်ထည့်ပြီး... နောာ (Knoor) မန်ကျည်းခဲ တစ်ဝက်ထည့် (သို့) မန်ကျည်းရည်ထည့်ပြီး အားလုံးကိုသမအောင်လက်နှင့်နယ်ပါ။ ပြီးလျှင် မီးဖိုပေါ်တည်ပါ။ သူ့အရည်နှင့်သူ..ဆူလာပြီး အနံ့မွှေးလာလျှင်.. ရေသင့်တော်ရုံထပ်ထည့်ပြီး..ပွက်ပွက်ဆူအောင်ထပ်တည်ပါ။ ပြီးလျှင်အရသာမြီး.. အိုးကိုဖိုပေါ်မှချပြီးသုံးဆောင်ပါ...
ချဉ်စပ်ဟင်းရည်...စားလို့အရမ်းကောင်း... ငါးကြိုက်သူများ..ငါးခေါင်း (သို့) ငါးတုံးများကို ရေထည့်ပြီးနောက်ပိုင်းထည့်ပြီးချက်စားလဲကောင်းပါသည်။
Posted by စန္ဒကူး at 9:59 PM
ချဉ်ပေါင်ရွက်တွေကိုရေဆေး... အိုးထဲထည့်.. တည်လိုက်တယ် ပြီးနွမ်းလာရင်... ဘာမှမထည့်ဘဲ မွှေတယ်... ကြေပြီး နဲနဲစေးလာပြီဆိုရင်.. ကြက်သွန်နီလှီးထည့်... ငရုတ်သီးစိမ်းလှီးထည့်.. မျှင်ငပိ ကိုရေဖျော်ထည့် ဆီနဲနဲထည့်... ပြီး ဆားထည့်.. ချိုမှုန့်ထည့်.. ငါးငံပြာရည် (၃)စက်လောက်ထည့်.. ရေထည့်...
ချဉ်စုတ်နေတာ... ဟီးဟီး... (ကြိုက်တတ်ရင် ဟင်းအိုးပွက်ပွက်ဆူမှ မီးဖိုပေါ်ကချပြီး နံနံပင်လေးနဲနဲအုပ်) အဲဒါကူးကူးရဲ့ အလွယ်နည်းပါ..
** ကြက်ဥလေးတွေကို အလုံးလိုက်ကြော်ပြီးရောထည့်လိုက်ရင်လဲဟင်းတစ်ခွက်ရရော...
Posted by စန္ဒကူး at 9:57 PM
ငါး - ခတ်လတ်လတ်(၁) ကောင်
အကြော်မှုန့် (သို့) တန်ပူရာမှုန့်
ငါးတစ်ကောင်ကို ဗိုက်ဖောက်၊ အူထုတ်၊ ဗဟက်ထုတ်ပြီး တည့်တည့်ခွဲချပါ။ ပြီးလျှင်ပြားပြားလေးဖြစ်အောင် မှောက်ချပြီး ခေါင်းမှ ကျောရိုးအလည်ကို ဓါးနှောင့် (သို့) ငရုတ်ကျည်ပွေ့နှင့် ထုပါ... ပြီလျှင်..
ငါးတစ်ကောင်လုံးကို ကြက်ဥအနှစ်ဖြင့်သုတ်ပါ.. ပြီးလျှင် အကြော်မှုန့်ထဲ ထည့်လှိမ့်လိုက်ပါ.. ငါးတစ်ကောင်လုံးဖြူသွားသောအခါ..ဆီအေးအေးနှင့်ကြော်ပါ.. ကြော်နေသောအချိန်တွင်
ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ၊ ဂျင်း၊ ငရုတ်သီးခြောက်တို့ကိုညက်အောင်ထောင်းထားပါ. ပြီးလျှင် ဆီသတ်
မွှေးလာလျှင် ပဲငပိ ကိုထည့်ပါ.. (ပဲငပိ ဆားငံသောကြောင့်ဆားထည့်ရန်မလို) အချိုမှုန့်နဲနဲ.. သကြားနဲနဲထည့်ပါ...
ပြီးလျှင်... ကျက်ခါနီး.. ကော်ရည်ဖျော်ပြီးထည့်ပါ...
့ပန်းကန်အပြားကြီးကြီးပေါ်တွင် ဆလတ်ရွက်ကြီးကြီးနှစ်ရွက်ကို အောက်ခံအနေနှင့်ခင်းထားပါ... ပြီလျှင်ကြော်ထားသောငါးကို မှောက်ပြီး အလယ်တွင်တင်ပါ... ပြီးလျှင်.ချက်ထားသော ပဲငပိကော်ရည်ဟင်းနှစ်ကို ငါးကြော်ပေါ်သို့ လောင်းချ..ပတ်ပတ်လည်တွင်လဲလောင်းချပါ... ချယ်ရီတိုမေးတိုး (cherry tomatos) ခရမ်းချည်သီးသေးသေးလေးများကို နုတ်နုတ်စင်း... ပြီး ပန်ကန်ပတ်ပတ်လည်တွင်ချထားပါ...
Credited to .... To To Ni Ni
Posted by စန္ဒကူး at 9:50 PM
ငါး - ကျပ်တိုက် (၃) ကောင် ( ငါးခြောက်ရောင်းသောနေရာမှ ကြပ်တိုက်ထားသောငါးခြောက်)
ငရုတ်သီးစိမ်းများကို မညက်တစ်ညက်ထောင်းပါ။ ငါးများကို နွှာထားပါ (ကြပ်တိုက်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် ပြုပ်ရန်မလိုတော့ပါ) နံနံပင်ကိုပါးပါးလှီးပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းထောင်းထားသောအထဲသို့ ငါးကြပ်တိုက်နွှာထားသောအဖတ်များ၊ လှီးထားသောကြက်သွန်များကိုထည့်ပါ။ နံနံပင်ကိုထည့်ပါ ချိုမှုန့် နဲငယ်ထည့်ပြီး အနဲငယ်သမအောင်ဆက်ထောင်းပါ။
ပြီးအရသာမြည်းကြည့်ပါ။ ငါးကြပ်တိုက်ဆားငံလျှင် ဆားထည့်ရန်မလိုပါ.. အငံကြိုက်လျှင်စားအနဲငယ်ထပ်ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင်ခပ်ပြီ ဟင်းခွက်တွင်ထည့်ထားပါ။
သံပုရာသီးတစ်ခြမ်းကိုလှီးထားပြီ.. စားသောအခါအဆင်သင့်ညှစ်စားနိုင်ရန် ဘေးနားမှာ ပုံထားပါ။
တစ်ခါတုန်းက....ကောင်လေးနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဒေါ်ရိတ်ကြီးဆိုင်မှာ ထိုင်ပြီး ကောင်မလေးတွေငမ်းနေတာကို အတူထိုင်ကြည့်ဖူးတယ်။
တစ်ခါတုန်းက.... ကောင်လေးက အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဆေးကုလာမ ကျောက်ကျောမဲမဲတွေကို ဖားလောင်းတွေကို ကြိတ်ထားတာ မသောက်နဲ့လို့ပြောတာယုံပြီးမသောက်ရဲတော့တဲ့ကောင်မလေးရှိဖူးတယ်။
တစ်ခါတုန်းက... ကောင်လေးရဲ့သူငယ်ချင်းတွေက လူသားတွေကို စီးတီးမတ်မှာ စရောင်းနေပြီ၊ ဟိုအသားရှိလားလို့ ဒိုင်ရှိုမေးရတယ်လို့ပြောတာကိုယုံပြီး သွားမေးလို့ အရှက်ကွဲဖူးတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။
တစ်ခါတုန်းက....ကောင်လေးက အမျိုးတွေသွားကြည့်မယ်လို့ခေါ်တော့ ယောင်တောင်တောင်နဲ့ တရိစ္ဆာန်ရုံကို ခဏခဏရောက်ဖူးတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။
တစ်ခါတုန်းက....လိုင်းကားက အရမ်းစီးလို့ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး လူတွေကျပ်ညပ်နေတဲ့လိုင်းကားကို ပုဇွန်တောင်အထိလိုက်စီးဖူးတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။
တစ်ခါက...တစ်ခါက ပေါ့.... ငတုံးမလေးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့.... သူကဘယ်သူလဲ...
Posted by စန္ဒကူး at 2:57 AM
If you open this, you have to repost it so that you'll be showered with only love for the rest of your life .
Posted by စန္ဒကူး at 10:21 PM
နှစ်ထပ်ကားစီးဖူးကြလား.. ကျွန်မကတော့နှစ်ထပ်ကားကို စင်ကာပူရောက်မှတွေ့ဖူးတာပါ..စီးချင်လိုက်တာ..ပြောမနေနဲ့
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မွှား ဆိုတာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဖူး..လူကြီးတွေပြောတာတော့ကြားဖူးတယ်.. ပိုးမွှားတွေကိုက်မယ်..ဘာညာပေါ့... ပိုးကတော့ဟုတ်ပီ..မွှားကဘာလဲ..
ကားပေါ်ရောက်တော့ ထိုင်တာမကြာတေးဘူး..အဲဒီမွှား က လက်ပေါ်တက်လာတယ်.. ခါထုတ်လဲမရ.. ဖိသတ်လဲမရ...
လက်ချောင်းတွေလဲပါတယ်..တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်.. အကောင်သာကြီးရင်.. တောဘုရင်ဖြစ်မှာ..
Posted by စန္ဒကူး at 7:46 AM
ဒီတစ်ပတ်ရုံးပိတ်ရက်မှာတော့...ဖြစ်သလိုစားနေတာကြာလို့ဈေးသွားပြီးတော့ဟင်းချက်စားအုံးမှဘဲဆိုပြီး..ဒီနေ့စောစောထ၊ စောစောဆိုတာ (၈း၃၀) ပါ ဈေးကိုလမ်းလျှောက်သွားတယ်..လမ်းမှာဈေးကပြန်လာတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တော့ သူတို့က ..ဟေး ဘယ်သွားမလို့လဲဆိုတော့ရှက်တာနဲ့ ကျောင်းနားခဏသွားမလို့လို့ပြောခဲ့တယ်။ သူများဈေးပြန်လာတဲ့အချိန်မှ..ဈေးသွားတဲ့အဖြစ် ဒါတောင်မနဲကိုအိပ်ရာပေါ်ကထရတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က အိမ်မှာဆန်ကုန်သွားတော့ ၀ယ်ထားပြီးသားလုံးတီးဆန်အညိုတွေကိုဘဲချက်စားနေတာ.. စားလို့လဲမကောင်းဘူး.မနဲဝါးရတယ်..အရေးထဲအံသွားကလဲပေါက်တော့... မ၀ါးနိုင်..ဒီကဆန်တွေက အကောင်းဆုံးတောင် တော်တော်ဆိုးတယ်။ ဆန်ဝယ်မယ်ဆိုရင် ယိုးဒယားက ဆန် (Jasmine Rice) ကိုဝယ်စားရတယ်။ ဆန်အကောင်းကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး..အဲဒီဆန်ကမြန်မာပြည်ကဆန်နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်လေ..
သူကလဲ ကီလိုနဲ့ခွဲမရောင်းဘူး၊ ၀ယ်ချင်ရင်အိတ်လိုက်ဝယ်ရတာဆိုတော့..မ၀ယ်ဘဲရှိတာနဲ့စားနေတာ..
သောကြာနေ့ကတော့ သူငယ်ချင်းကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ဆန်အိတ်လိုက်ဝယ်လာခဲ့ပေးပါလို့ အကူညီတောင်းတော့..အခုဆိုဆန်လဲရှိပြီ..တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။
ဈေးသွားတော့ တလားဗီးယား ငါးဝယ်မယ်ဆိုပြီးငါးတန်းထဲဝင်တာ..လူတွေများလို့မတိုးနိုင်တာနဲ့ အပြင်ကိုပြန်ထွက်.. ကြက်ဥအညိုရောင်လေးတွေတွေ့တာနဲ့ဝမ်းသာပြီး (၁၀)လုံးဝယ်လာတယ်။ (ဒီမှာကြက်ဥအဖြုတွေဘဲရှိတာကိုး) ပြီးတော့ မုံညှင်းအဖြူအစည်းကြီးတစ်စည်းဝယ်၊ ပိန်းနှဲသီးနုနုလေးတွေကို အခွံခွာပြီး ဖြတ်ထားပြီးသားတွေရောင်းတာနှစ်ထုတ်ဝယ်။ နံနံပင် (ဒီကနံနံကတစ်မျိုး..ပိန်ညောင်ရှည်ရှည်နဲ့)တစ်စည်းဝယ်၊ ပြီးတော့ ငါးတန်းက ထွက်တဲ့အခြမ်းကပြန်ဝင်ပြီး တလားဗီးယားအရှင် (၃)ကောင်ဝယ်ပြီး အကောင်လိုက်အကြည်းခွံခွာပြီး ဗိုက်ခွဲခိုင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဌက်ပျောဖူးတစ်ဖူးဝယ်။ ရွှေငါးလေးတွေ၊ ငါးသေးသေးတွေပလတ်စတစ်အိတ်ထဲထည့်ပြီးရောင်းတဲ့နေရာမှာသွားစပ်စုလိုက်သေးတယ်။ အောင်မလေး မြွေတွေကိုပါရောင်းတာ.. ပလတ်စတစ်ထဲရေထည့်ပြီး မြွေကိုလဲထည့်ထားတယ်။ ရေမြွေလားမတိဝူး..လှတော့လှတယ် အစင်းကျားနဲ့.. အဲဒီကနေတစ်ပတ်ပြန်ပတ်ပြီး ဗူးသီးသေးသေးတစ်လုံးနဲ့ ခရမ်းသီး (လက်ညိုးလောက်ဘဲရှိမယ်) အဲဒါ ပဇွန်ခြောက်နဲ့နှပ်စားရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးဝယ်ခဲ့သေးတယ်။ မိုးကလဲဖွဲဖွဲရွာ လိုက်၊ ရပ်သွားလိုက်နဲ့..ကျွန်မထီးမပါ..မိုးရေထဲဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်လာရော..
အိမ်ရောက်တော့.. ထမင်းအိုးတည်၊ ငါးကိုအကောင်လိုက်ရေပြန်ဆေး၊ မစင်သေးတဲ့အကျည်းခွံလေးတွေပြန်ခွာ ပြီး နှစ်ကောင်ကို ရေခဲသတ္တာထဲထည့်၊ ကျန်တဲ့အကောင်ကိုတော့ ငံပြာရည်နဲ့ပြုပ်လိုက်တယ်။
ကြက်သွန်ဖြူနီ၊ ထောင်းထားတာကိုရေနွေးပွက်ပွက်ဆူထဲထည့်၊ ပြီး ပြုပ်ပြီးသားငါးကို အရေခွံတွေခွာပြီးလွှင့်ပစ်၊ အသားချည်းလဲနွှာပြီး ဟင်းချိုအိုထဲထည့်.. ပြီးတော့ မုန်ညှင်းအဖြူတွေကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီး နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီး အိုးထဲထည့်၊ ဆားနဲနဲထည့်လိုက်တော့ တော်တော်ချိုတဲ့ဟင်းချိုအိုးတစ်အိုးရပြီ။
ပိန်းနဲသီးအနုလေးတွေကိုတော့ ငရုတ်သီးစပ်စပ်နဲ့ မနေ့ကလုံးထားတဲ့အသားနဲ့ရောပြီးချက်လိုက်တယ်။
ခရမ်းသီးသေးသေးလေးတွေကိုတော့ပြုပ်ပြီး၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နံနံနဲ့ ရောထောင်းပြီး..ကျွန်မရဲ့ မနက်စာချက်ပြုပ်ချင်းကိုရပ်လိုက်တယ်။ ဟိုနေ့က ဌက်ပျောသီးကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေရေးထားပြီးမို့..ဌက်ပျောသီးစားမှဆိုပြီးဌက်ပျောသီးတစ်ဖီးဝယ်လာတာနဲ့
ကျွန်မအရမ်းကြိုက်တာ Cheese လဲပါတယ်။ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ရုံးကိုအလာလမ်းမှာ. Cheese Slice အပြားတွေကိုဒီတိုင်းကို စားနေတာ..ကျမ်းမာရေးနဲ့တော့မညီညွတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကြိုက်တာကိုး..
အဖိုးကလဲဆေးရုံမှာရှိတဲ့အချိန် သူနဲ့မတဲ့တာတွေဆရာဝန်ကမစားခိုင်းတာကို သူ့ကိုစောင့်တဲ့အိမ်ဖော်မလေးကို
ညနေကျတော့..မ၀ယ်မဖြစ်အသုံးအဆောင်လေးတွေသွားဝယ်မယ်ဆိုပြီးအိကျီဝတ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ထဲကြည့်ပြီးတော်တော်စိတ်ပျက်မိတယ်...တော်တော်တုတ်တဲ့ခါး..အဆီတစ်ထပ်..အသားတစ်ထပ်...
ခန္တာကိုယ်မှာဝမယ့်ဟာတွေအကုန် ဗိုက်နဲကခါးမှာစုနေတာ.. လေ့ကျင့်ခန်းတော့ပုံမှန်လုပ်အုံးမှဘဲ... (အတွေးထဲမှာ..ဟီးဟီး)
Posted by စန္ဒကူး at 5:06 AM